ခေါင်းစီးကြိုးတွေကို သတိထားကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခေါင်းစီးကြိုးတွေကို သတိထားကြပါ
Posted by ဘဲဥ on Jun 5, 2012 in Copy/Paste | 26 comments
စားသောက်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးများသာမက လူသုံးကုန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါ သတိထား သုံးစွဲရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။
ပြည်သူလူထု ကြီး ခင်ဗျာ….
ဈေးပေါတယ်၊ သက်သာတယ်၊ သုံးရတာ လွယ်ကူ အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာလောက်ကို ကြည့်ပြီး ဘေးအန္တရယ် ကျရောက်နိုင်တာ၊ သုံးစွဲရ သင့်တော် မသင့်တော် ကိုပါ ထည့်တွက် စဉ်းစားပြီးမှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆံပင် ခေါင်းစည်းကြိုးကို သေသေချာချာ သတိပြု မိသူကတော့ အတော့်ကို ရှားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံတွေ ကြည့်ရအောင်–
တွေ့တဲ့ အတိုင်းဘဲ – ဒီဆံပင် ခေါင်းစည်း ကြိုးတွေကို အရောင်လှလှ ချည်မျှင်လေးတွေနဲ့ ပတ်ထားတာကို ဖြေကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ– အတွင်းမှာ ကွန်ဒုံ (Comdom) တွေကို ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုကြောင့် အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ မိမိဘ၀ အသက် ထိခိုက်မှာကို တွေးမိတိုင်း… ရင်လေးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
နာအရင်တုန်းက အဲဒါတွေ စည်းဖူးတယ်
အခုမှ ဆံပင်ကို ၀မ်းဝေး ထားလိုက်လို့မစည်းဖြစ်တော့တာ.
နင့်ခေါင်းပေါ် ဟိုဟာတွေ တင်ထားသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့နော့ ..
အေးဟယ်……… ရွံထှာ ………… တင်စရာရှားလို့ ဗိုက်ဗိုက်ရယ်….. ဟိုဟာမှရွေးတင်ခဲ့ရတယ်လို့
အဆင့်မမီလို့ရောင်းမရတဲ့ဟာတွေကို ပြန်လုပ်တာဒဲ့
တော်တော်လေးကို စုတ်ပဲ့တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါလား…
ဘဲဥ ရေ သေသေချာချာ မှတ်သွားတယ်ဗျို့
စနစ်တကျသာ ရီဆိုက်ကယ်လုပ်ရင်ဖြင့် အားပေးရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီနော်…
တိုဖတ် ရီဆိုက်ကယ်က ခေါင်းစီးကြိုးမဟုတ်ဘဲ
ဟုတ်တယ်.. ဒီသတင်းကို ကြားထားတာ ကြာပီပေါ့…
ခုတော့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ရပီ..
ဒီကောင်တွေတော့ ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ထုပ်လုပ်လိုက်ပေမဲ့ သုံးမိသူ
လုပ်လိုက်ရင် တရုတ်ကကြီးပဲ။ မဟုတ်တာအကုန်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ကိုအထင်ကိုမကြီးဘူး။
ကလေးတွေသောက်တဲ့နို့မှုန့်မှာလည်း မယ်လမင်းတွေထည့်လိုထည့် …. ကလေးအသေနဲ့အားဆေးတွေ ကိုရီးယားကိုပို့လိုပို့… အခုလည်းမြန်မာဘက်ကို မူဆယ်ဘက်ကစားအုန်းဆီအညံ့စား (အဲဒီကစက်ရုံတွေရဲ့
ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေ) တွေ ၀င်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အိမ်နီးနားချင်းကောင်း
2008 တုန်းက အီးမေးလ်တစ်ခုမှာ .. အဲ့ဒီအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတယ် .. နောက်ပိုင်း ခေါင်းစည်းတွေဆို … အဲ့လိုပုံတွေမ၀ယ်ဖြစ်တော့ဘူး .. အဟီး … ထင်သာ မြင်သာ ရှိတဲ့ ဖုန်းကြိုးလို ခေါင်းစည်းတွေပဲ ၀ယ်တော့တယ် …. ။
အကြံဖန်လုပ်သူတွေများ .. တကယ့်ကို .. အံ့သြတယ် … ။ မရွံမရှာဟယ် …
အော်ဒုတ်ခ ဒုတ်ခ စီးပွားရေးကို ဘာလို. အဲဒီလောက် ယုတ်မာတဲ့နည်းနဲ.လုပ်ကြပါလိမ့်.. ဒါပေမယ့်လဲ အဲလိုထုတ်တဲ့ကောင်တွေ အရင် အဲဒါတွေ ကိုင်ရတာဆိုတော့ သူတို.အရင်ကူးမှာပါ… သူ.အားနဲ.သူသွားလိမ့်မယ်…
သိထားစရာပေါ့…. သတိထားရအောင် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ
အူးရွှေတိုက် အုပ်အုပ်ကို အဲလိုအပေါစားတွေဝယ်မပေးနဲ့နော်
ရွှေတိုက်ရေ … အဲ့ဒီထက်ယုတ်မာတဲ နည်းနဲ့ လုပ်စားနေတာတောင် ကိုယ်တွေ့မြင်ခဲ့သေးတယ် … ပို့စ်တင်ပါဦးမယ် … ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရသေးလို့ပါ …. ။
တီလုပ်ကြီး ပစ်စည်းဆို ဘာမှမသုံးတော့ဘူး…
တီလုပ်မလေးတွေ …… ဆိုမှ သုံးတော့မယ်…
နိုဝင်ဘာ.. ၂၀၀၇ ကသတင်းပါ…
ချိုင်းနားက.. သူတို့လုပ်တာ.. သုံးထားတဲ့.ကွန်ဒုံတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့..
အဆင့်မမှီတဲ့..ဟာတွေကို.. သုံးတာပါတဲ့.. လေ..
အင် ဒုက္ခပါလားကွယ်။အင်း အရည်အသွေးစံမမှီတဲ့ ပစ္စည်းတွေ
ဟာ အဲဒါမှ ပြသနာ
အင်းဒီသတင်းက ကြာတေ့ာကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတဲက အင်တာနက်မှာတွေ့ဖူးပါတယ်။ အခုသူ့ထက် ဆိုးတာက ၀က်နားရွက်အတုတွေလုပ်နေတာပါ။ ရာဘာနဲ့ ကယ်မီကယ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ၀က်နားရွက်အတုလုပ်နေတာတရုတ်ပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် မကောင်းမှု့ပါ။ ဒီက၀က်နားရွက်စားသူတွေ လဲနယ်စပ်က၀င်လာနေအုံးမယ်။ သတိထားစားကြပါ။ ပြုတ်လိုက်ရင် ရာဘာနံ့ထွက်တယ်တဲ့။
အခုမှဘဲ သိရတော့တယ် ။ တော်ပြီ ၊ ဒီနေ့ က စပြီး အဲ့ဒါတွေ မသုံးတော့ဘူး ။
ကိုကိုဂီရဲ့ အသံဖြင့် ( ရွံထှာအေ )
တရုတ် (င်္လရှုပ်) ပစ်စီး သတိထား ရတော့မယ်အေရယ် ။